macaanka galmada Xubinta taranka haweenka oo cidhiidhi noqota | Gaaloos.com
Home » galmada » macaanka galmada Xubinta taranka haweenka oo cidhiidhi noqota
macaanka galmada Xubinta taranka haweenka oo cidhiidhi noqota
Khabiiro badan oo ka faallooda arrimaha galmada iyo qoyska ayaa ku dooday inay galmada faraha badan keento farxad farabadan, laakiin daraasad la sameeyey ayaa lagu soo saaray natiijo rasmi ah.
Haddii laguu sheegi jiray inaad ku qasban tahay inaad waqti badan ku qarash gareyso la galmoodka lammaantaada si aad farxad badan u hesho, isla markaana aad qaadan jirtay waanada nuucaas ah, hadda waxaad ku qasban tahay inaad ka fogaato.
Baaritaankii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen khuburo ka socota jaamacadda Carnegie Mellon University ayaana laguu ogaaday in aysan galmada faraha badan keenin farxad badan, bedelkeedana ay hoos u dhigto farxadda qoyska.
Professor George Leowenstein, oo dhaqaalaha iyo cilmu-nafsiga ka dhiga jaamacadda Carnegie Mellon University iyo kooxdiisa ayaana daraasaddaan sameeyey waxayna la kulmeen in ka badan 1,288 lammaane muddo 90 cisho ah oo ay baaritaankaan wadeen.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa daraasaddaan lagu ogaaday in farxad galmeedka rasmiga ah uu ku jiro isku tagga aan joogtada aheyn ee lammaanaha, waxaana sidoo kale daaha looga qaaday baaritaankaan in aysan waxba ka jirin aragtida ah in galmada badan ay farxad keento, ama farxadda badan ay salka ku heyso galmada.
Title: macaanka galmada Xubinta taranka haweenka oo cidhiidhi noqota